Awungomsebenzisi wakho | Martech Zone
Awunguye uMsebenzisi wakho
NgoLwesihlanu, Novemba 20, 2009 NgoMgqibelo, Septemba 7, 2013 Travis Smith
Ukuba uyingcali kwishishini lakho, wazi ngaphezu kwayo nayiphi na into malunga nento oyenzayo kunye neenkcukacha zemveliso yakho. Imveliso yakho, ngendlela, inokuba yinkonzo, iwebhusayithi, okanye into ebambekayo. Nokuba yeyiphi na eyenziweyo akho imveliso, unokububona ubungcali bakho kunye nengqondi kuyo yonke indawo. Ingxaki yile? abathengi bakho abanakho.
Abathengi kufuneka bagqibe umsebenzi ngemveliso yakho ukuze baqhubeke neminye imisebenzi ekufuneka beyenzile. Bonke abathengi bakho babona kwimveliso yakho sisixhobo sokubanceda bafeze injongo.
Ukwenza imveliso eyimpumelelo, kufuneka uqonde ukuba ngubani oyisebenzisayo le nto bayisebenzisayo. Kuya kufuneka ukwamkele ukuba imveliso ayenzelwanga wena ikakhulu.
Ungakufumanisa njani okufunwa ngabathengi bakho?
Babuze? Hayi kakhulu, kulula.
Bukela abathengi besebenzisa imveliso yakho. Rekhoda naziphi na iingxaki abanazo kwaye loluphi uhlobo lolwazi abalindele ukulubona kwimveliso yakho.
Vavanya amanqaku amatsha, ngokusebenza, kunye noyilo. Abathengi bayathanda ukunika ingxelo, kwaye baya kuba namava angcono kumsebenzisi kwixa elizayo kuba baziva ngathi bancedile ukwenza imveliso entsha ibe ngcono.
Ukufunda oko kufunwa ngabathengi bakho akufuneki kube yinto entle, ebizayo, okanye etya ixesha.
Khumbula, uyingcali, kodwa abathengi bakho abakho.
Banike ntoni nina Ndicinga bayazidinga, kwaye baya kuya kwenye indawo.
Banike ntoni eneneni imfuneko, kwaye baya kukuthanda ngayo.
UTravis wazalelwa kwaye wakhulela kwilizwe elikude ekuthiwa yiNebraska, kwaye emva kokufunda kwikholeji eMissouri, wagqiba i-MBA kunye neMasters yezeNtlalontle kwiYunivesithi yaseBall State. U-Travis unezinto ezininzi, kubandakanya i-cameraman, i-tutor, i-disc jockey, umthengisi obhala phantsi, u-barista, umkhenkethi ohambahambayo, ilayibrari, umculi we-sandwich, umphathi we-ofisi, umphandi, isifundo sophando, i-HR lackey, kunye nomphathi weprojekthi, zonke ezizilungiselele ngendima yoMhlalutyi wamava oMsebenzisi. KwiTuitive, uphethe uphando ngomsebenzisi, ukuvavanywa komsebenzisi, ukumodareyitha komsebenzisi, ukuqokelela iimfuno, kunye nokugcina umntu kuyilo olujolise ebantwini.
Awumhleki, ngoku uza kwenza ntoni?
Uphawu olunobuchule: West Baden
Juni 19, 2010 ngo-4: 34 AM
Iposti entle, ukubaluleka kokufumana "Awusemsebenzisi wakho" akunakuchazwa amaxesha aneleyo!
Ndilwandisile kwinqaku lakho ngeengozi zokungaqondi umthetho-siseko othi "Awungomsebenzisi wakho" kwibhlog yam - http://www.webusability.se/blog/2010/06/19/the-dangers-of-you-are-not-your-user/